आफै, हेर्न र पोशाक हुन तपाईं जस्तै, जीवन आफ्नै नियम सेट - के राम्रो हुन सक्छ? तर कहिले काँही यो एक व्यक्ति बस आफू र आफ्नो प्राथमिकताहरू परिवर्तन र मौलिक गर्न जरुरी आवश्यकता छ भनेर हुन्छ। कसरी पहिचान परे परिवर्तन गर्न? किन यस्तो आवश्यकता छ? हामी तल विवरण यो कुरा।
आफूलाई परिवर्तन गर्न इच्छा को कारण
यति धेरै राय - परिवर्तन कारण कति मान्छे हुनाले, तपाईं थाह छ, धेरै हुन सक्छ। परीक्षण गर्न मानिसहरू आफू अक्सर यी कारणहरू धक्का मा:
प्रेम। विशेष गरी पहिलो, किशोर प्रेम, वा तेज भावना आकर्षण विपरीत सेक्स गर्न। आफ्नो जीवनको पहिलो वर्ष मानिस विचार संग उठ गर्न सक्नुहुन्छ: "म पहिचान परे परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, ताकि मेरो प्रिय (मेरो प्यारो) मलाई प्रेम गर्न सक्छ।"
कम आत्म-सम्मान। जब एक कुराको आजको अवस्थामा, उहाँले जीवनमा केहि पनि हासिल गरे यो मानिसहरूलाई देखिन्छ र बुझाउँछ कसरी छैन, त्यो आमूल परिवर्तन मा फैसला गरेको छ कि बुझ्नुहुन्छ।
इच्छा ध्यान आकर्षित गर्न, लोकप्रिय हुन। आत्म-केन्द्रित प्रकृति बारम्बार परिवर्तन गर्न धेरै खतरा छ। निस्सन्देह, तिनीहरू प्रेम, तर खोल उपस्थिति, तिनीहरूले स्थित जुन तिनीहरूले सन्तुष्ट छैन निरन्तर छन्।
व्यक्तिगत विकास। आफ्नो जीवनमा केहि परिवर्तन गर्न स्वस्थ इच्छा, साधारण मानव जिज्ञासा को एक दृश्य छ। हामी सबै नयाँ कुरा सिक्न र आफ्नो जीवन मा यो ल्याउन प्रेम।
साथै, त्यहाँ पनि परिवर्तन गर्न व्यक्ति सार्न भनेर मनोवैज्ञानिक कारक हो। विभिन्न तनाव परिस्थितिहरू, संघर्ष र असफलता इच्छा परिवर्तन गर्न सक्छ। यस अचेतन नयाँ छवि पछिल्लो सँग सम्बन्धित सुरक्षा द्वारा नकारात्मक रूपमा कथित गरिनेछ।
मानिसहरू लागि बाहिरी परिवर्तनहरू
उपस्थिति मा मानिसजातिको परिवर्तन बलियो आधा प्रतिनिधिको व्यावसायिक सहायता बिना पर्याप्त गाह्रो छ। तल केही तरिका मा एक नजर छ कसरी उपस्थिति परिवर्तन गर्न मानिसहरू लागि, पहिचान परे उपयुक्त:
सक्रिय खेल गर्छन्। यो जीवन को मात्र होइन बाटो, तर पनि उपस्थिति परिवर्तन गर्न ठूलो अवसर हो। सायद धेरै मानिसहरू एक सुन्दर, इम्बोस गरिएको शरीर को सपना। तर शारीरिक exertion असम्भव बिना यस्तो परिणाम हासिल गर्न।
छवि परिवर्तन गर्न। Sostrig दाढी, जुङ्गा regrown वा, conversely, एक बढ्न। यो निकै को अनुहार सुविधाहरू परिवर्तन। प्रयास आँखा रंग परिवर्तन गर्न रंग लेंस नाटकीय आफ्नो दराज परिवर्तन प्रयोग गरेर।
विपरीत सेक्स संग सही र competently कुराकानी गर्न सिक्नुहोस्। महिला कान प्रेम, त्यसैले, अर्डर आफ्नो नेटवर्क आवेग वस्तु प्राप्त गर्न, तपाईं संचार को शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक र।
तपाईं जो आफैलाई स्वीकार। यसको आफ्नै संग सम्झौता "म" दुवै आन्तरिक र बाह्य परिवर्तन को प्रक्रिया accelerates। विस्तार, किन र किन यो के मा समीक्षा, आफैले प्रश्न को अनिवार्य सहमति परिवर्तन गर्न निर्णय भएको।
निस्सन्देह, मानिसहरू परिवर्तन को लागि कम विकल्प छन्। र सबै भन्दा आमूल विधि प्लास्टिक सर्जरी छ। तर यस्तो उपाय गर्न Resort गर्ने कि नगर्ने?
महिला लागि बाह्य परिवर्तनको विधिहरू
महिला पर्याप्त एक सना भ्रमण गर्न, यो inconceivable परिवर्तन गरिएको छ। कसरी पहिचान परे केटी परिवर्तन गर्न? बस सरल निर्देशन पालना गर्नुहोस्:
लुगा परिवर्तन गर्नुहोस्। छविमा परिवर्तन खातामा एक आंकडा को सुविधाहरू लिइरहेको गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं छोटो खुट्टा र पूर्ण छ भने, एक प्रतिस्थापन स्कर्ट Maxi मिनी छैन उपयुक्त छ। सुरू गर्न, तपाईं सबैभन्दा मिल्दो जो शैली निर्णय। तपाईंले पहिले नाटकीय परिवर्तन को लागि एक सख्त, क्लासिक लुगा गर्न उपयुक्त छ भने तपाईं खेल वा शहरी शैली प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
Hairstyles परिवर्तन। आकार र कपाल को रंग परिवर्तन हामीलाई शाब्दिक 1.5-2 घण्टा परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले लामो कपाल एक गोरा थिए? छोटो कपाल एक जल श्यामला बन्न! तर, यो बारम्बार बाल रंग कपाल हानि हुन सक्छ कि सम्झना गर्नुपर्छ।
सजावटी कस्मेटिक्स प्रयोग। कसरी पहिचान परे परिवर्तन गर्न? मेकअप लागू हुन्छ। को एजेन्ट को सही आवेदन एक व्यक्ति धेरै फरक बनाउन सक्छ।
वजन। तपाईं कट्टरपंथी परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो वजन सुरु हुन्छ। यो आवश्यक छैन एक कठोर आहार मा बस्न र आफूलाई एक भोक हड्ताल गति छ। यो नै लागि उम्कन पर्छ जो देखि किलोग्राम संख्या निर्धारण गर्न suffices।
र पहिचान परे परिवर्तन गर्न कसरी सबै तरिका छैन। महिलाहरु बढी आविष्कारशील यस सन्दर्भमा, तिनीहरूले मौलिक 1 दिन, हप्ता वा महिनाको लागि आफैलाई परिवर्तन र विशेषज्ञहरु को हस्तक्षेप बिना गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै परिवर्तन आन्तरिक परिवर्तन सुरु। भनेर आफूलाई लागू गर्न चाहनुहुन्छ हरेक वस्तु संग बोल्न निश्चित हुनुहोस्। दुवै sexes, तपाईं परिवर्तन गर्न सुरु गर्नु अघि, यो विचार लायक छ, र यो सबै किन आवश्यक छ? तपाईं कसैलाई वा कसैले यसलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि आफैलाई व्यक्ति अर्को कि, सबै परिवर्तनहरू पछि सोध्न? तपाईं सफल सुन्दर र लोकप्रिय हुनेछ? तपाईं एकदम किनभने एक क्षणिक इच्छा को आफ्नो जीवन मा सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ - परिवर्तन क्रमिक र जानिजानि हुनुपर्छ।
आंतरिक पहिचान परे कसरी परिवर्तन गर्ने? जो बिस्तारै आफ्नो छवि, जीवन र प्रकृति को गति परिवर्तन सानो कदम, सुरु हुन्छ।
के तपाईं सबैभन्दा चाहनुहुन्छ निर्णय गर्नुहोस्। विशिष्ट इच्छा सूची सिर्जना गर्ने, सबै भन्दा coveted चयन गर्नुहोस्। आफूलाई घरेलू, दैनिक उदाहरणका लागि यस्तो नयाँ लुगा धुने मेसिन वा कुकर खरीद रूपमा योजना, को कार्यान्वयन लागि खर्च गर्न आवश्यक छैन। तपाईं आराम, पछिल्लो समय, आराम गर्दा आफ्नो परिवार संग समय खर्च बारे जस्तो लाग्छ? संयुक्त रात्रिभोज संग बिदाको संग शुरू, र परिवार संग चलाउँछ। एक्लो मान्छे नयाँ मान्छे भेट्न, साथीहरू र आमाबाबुले संग संचार भेट्नुपर्छ।
तपाईँको दिन सही योजना। आज गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सूची बनाउन, र तपाईं बाहिर वस्तुहरू पार पूरा रूपमा - एक दृश्य प्रतिनिधित्व कार्य पूरा भएको छ भनेर बुझ्न पनि अचेतन मद्दत गर्छ, र यसैले, यो को विचार अब उपयुक्त छ।
सधैं को सपना देख्यो छ के सिक्न
हामी निरन्तर नयाँ कुरा सिक्ने, जीवन को लागि सिक्न। तर यो सधैं लुकेका संभावित लागू गर्न आवश्यक ज्ञान प्राप्त गर्न अवसर गर्दैन। एक विदेशी भाषा सिक्न, गिटार पाठ, पियानो ले, एक गायक वा डिजाइनर रूपमा आफूलाई प्रयास गर्नुहोस्। कुनै पनि नयाँ भूमिका तपाईं छोटो समयमा खोल्न र चर गर्न अनुमति दिन्छ।
यो कारणले गर्दा नयाँ कौशल र ज्ञान गर्न गत महिना मा पहिचान परे परिवर्तन गर्न सम्भव छ? यो सबै परिवर्तन को लागि आफ्नो इच्छा र मास्टर निर्णय गरेको गतिविधिहरु को प्रकारको मा निर्भर गर्दछ। को कठिन यसलाई छ, अब सिक्ने र परिवर्तनको प्रक्रिया हो।
नयाँ भावना - नयाँ "म"
रूपमा विदेशी देशहरुमा सकेसम्म धेरै, र आवश्यक यात्रा। तपाईंले प्रदान नयाँ भावना को आगमन - मातृभूमि हरेक सानो कुना मा जानुहोस्। आफ्नो पैतृक शहर सडकमा मार्फत एक बाइक सवारी सवारी, ताल मा सूर्योदय पूरा - यो सबै आफ्नो जीवन सकारात्मक समुद्रमा ल्याउनेछ। आफैलाई लागि मुस्कान एउटा नियम लिन - मेरो साथ, एक मुस्कान मात्र तपाईं पनि तपाईं वरिपरिको विश्व।
एक हप्ता पहिचान परे कसरी परिवर्तन गर्ने? सकारात्मक radiate गर्न थाल्छन्। एक दिनको लागि, हाय, यो प्राप्त गर्न मानिस यदि प्रकृति द्वारा morose छ र जीवनको आनन्द कसरी थाहा छैन काम गर्ने छैन। विशेष प्रशिक्षण यस कौशल मास्टर गर्न मद्दत गर्नेछ।
मन्दिर, घरेलू समस्या, संघर्ष, पैटी झैझगडा को रूप मा अवचेतन रद्दीटोकरीमा गरौं किनभने - आफ्नो भित्री "म" भनेर नबिर्सनुहोस्। तिनीहरूले गाह्रो जीवनको आनन्द उठाउन बनाउन, एक व्यक्ति को भावनात्मक राज्य destabilize।
पुनरावृत्ति र दृढता
हृदय गुमाउनु छैन, आफ्नो कार्यहरू मा लगातार हुन। स्थिर पुनरावृत्ति, खोज र विगतका असफलता eradication हामीलाई पहिचान परे परिवर्तन गर्न कसरी बुझ्न अनुमति दिन्छ। वर्ण मात्र परीक्षण र त्रुटि द्वारा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जो बाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकेसम्म र तिनीहरूलाई काम सुरु गर्न चाहनुहुन्छ नरक आफूलाई परिभाषित।
तपाईं मौलिक परिवर्तन गर्ने निर्णय भने आलस्य र idleness को तिरस्कार सुरु। आफ्नो विचार र कार्यहरूको लगातार नियन्त्रण, यसको आफ्नै "म" अनुपालनको - परिवर्तनहरू सँग सम्बन्धित कठिनाइ हटाउन मद्दत गर्नेछ।
विगतमा तपाईंले के थियो, एक फिर्ता सीट लिनुपर्छ। पनि प्रस्थान घटनाहरू तपाईं सकारात्मक भावना ल्याउन र आराम गर्न मदत भने, उनीहरूले अझै पनि समय परिवर्तन को लागि पन्छाएर गर्नुपर्छ। सम्झना! अब जो तपाईं विगतमा थिए जो व्यक्ति, र त्यो व्यक्ति, - यो पूर्ण बिभिन्न मानिसहरूको।
, क्षण मा के भइ रहेको छ अन्य मामला परिदृश्य बारेमा सोच बिना आफ्नो ध्यान ध्यान। एकै समयमा हिड्ने बेला, केही अरूलाई कुराहरूमा आँखा ठीक मान्छे। तपाईं जहाँ स्थिति मा सर को बल मा जानुहोस्। स्थिर व्यायाम तपाईंलाई मनन कसरी र तिनीहरूलाई सम्पर्क स्थापित गर्न, र यो छ रूपमा वास्तविकता स्वीकार सिक्न हुनेछ।
पाठ तपाईं आफूलाई देखि आ negativity, र अत्यधिक चिन्ता आफूलाई सुरक्षित गर्न अनुमति दिन्छ। वास्तविकता को स्वीकृति, उहाँलाई आंतरिक परिवर्तन गर्न मदत, एक व्यक्तिको जीवन सुधार गर्न मद्दत गर्छ प्रेम र उहाँले छ के बुझ्न हामीलाई सिकाउँछ।
कसरी राम्रो सिक्न सुरु गर्ने? आत्म-अनुशासन र लक्ष्य सेटिङ को नियम
भइरहेको स्वस्थ निषेध छैन
कसरी संसारको परिवर्तन गर्न? आफैलाई परिवर्तन गर्न सुरु!
कसरी लाखौं खर्च बिना महंगा हेर्न
एक आइतवार रात सफल मान्छे के?
रूस मा कर को प्रकार: तपाईं उद्यमीहरू गर्न जान्नुपर्छ के
Gmail मा खाता मेटाउन कसरी विवरण
कवच हेडफोन: उनि के गर्दै छन् र सामान्य देखि फरक के छ?
को ओजोन तह को विपत्तिजनक विनाश
बाख्रा र बाँदर: अनुकूलता हँसिलो visionaries
ZIL 133 - सोभियत संघ को एक पौराणिक कथा
वैज्ञानिकहरूले त्यहाँ कम्तिमा 79 मोटोपना को "syndromes" हो भनेर भन्न
खुबानी देखि जाम, pitted
साइप्रस, Troodos: प्रकृति, फोटो, समीक्षा